Manolotra fomba manokana bebe kokoa hamoronana rakitsary sary | ny trano fivarotana Androidsis
Ny storehouse dia mitaky fomba manokana manokana hizarana sary, ankehitriny amin'ny Android
Ny trano fivarotana dia iray amin'ireo fampiharana hizarana sary sy horonan-tsary bebe kokoa no nahomby tamin'ity taona ity tao amin'ny iOS miaraka amin'ireo mpampiasa maro mirehareha ny amin'ny hatsaran'ity fampiharana vaovao ity izay tonga amin'ny fotoana mety indrindra amin'ny taona izay misy mpampiasa an-tapitrisany manana fakantsary fakan-tsarimihetsika amin'ny fakantsarin'izy ireo handefa sary an-jatony tapitrisa hisamborana ireo fotoana Krismasy mahagaga.
Rindranasa izay ananantsika izao amin'ny Android mba hanaporofoana ny hatsarany sy ny tombony azony ary raha tena marina ireo fijerena tsara izay azony avy amin'ireo mpampiasa finday iPhone an'arivony. Mety maro amintsika no afaka manantena karazana Instagram vaovao, fa ny hany zavatra iraisan'izy ireo dia ny mampiasa sary. Ny trano fivarotana dia manokana sy bebe kokoa ilay rakitsary ananantsika miaraka amin'ny sary tsara indrindra mampianatra ny namantsika na ny fianakaviantsika matetika isika rehefa tonga any an-trano izy ireo hitsidika, na farafaharatsiny, satria isika dia miova haingana be.
1 Ny rakipeo sary manokana
2 Ny fomba tsara indrindra hamoronana sary collage tianao indrindra
Ny rakipeo sary manokana
Ity rakitsary sary azonao atao eo amin'ny talantalana sasany amin'ny fanaka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, dia matetika manokana ary mampianatra ny olona any aoriana izahay, toy ny amin'ny Storehouse. Fampiharana izay miaraka amin'ity iraka manokana an'ny raiso am-pitiavana ny sary sasany ary hampianatra fifandraisana sasany izay fantatsika fa manan-danja amin'izy ireo isika.
Storehouse dia mitady fomba hamenoana akany hita ao amin'ireo mpampiasa izay aleon'izy ireo milaza tantara amin'ny alàlan'ny sariny ary ny fahaiza-manao lehibe ananany hizara izany amin'ireo mpifandray bebe kokoa. Ka mankany amin'ny rindranasa iray izay mety ho fitambaran'ny fitahirizana rahona sy mpanamboatra collage izahay. Karakaraina tsara ilay interface mba ho mora ampiasaina ary ahafahantsika mifantoka amin'izay zava-dehibe, dia ireo sary sy horonan-tsary hiorenantsika ilay collage antsoina hoe «tantara».
Esa "Tantara" dia atiny mavitrika ahafahantsika mandehandeha mitady fanovana ary manamora antsika, ho an'ireo izay tsy dia manana firavaka firy, hanolotra collage tena kanto miaraka amin'ny hatsarana izay manjelanjelatra nefa tsy mila manao zavatra betsaka ao.
Ny fomba tsara indrindra hamoronana sary collage tianao indrindra
Ny storehouse dia rindrambaiko izay ho any amin'ny toeram-ponenany tsara indrindra rehefa apetraka amin'ny takelaka iray isika, na dia amin'ny finday avo lenta aza dia mahavita tsara ny asany ihany koa. Izy io dia manana toetra mampiavaka azy toy ilay "ahintsano amin'ny toerana" rehefa mametraka ny sary tadiavintsika isika.
Noforonina ity rakikira ity azontsika atao ny mitahiry azy manokana toy ny mitranga ao amin'ny Dropbox na Google Photos na, raha tadiavinay dia afaka mahazo rohy web hampitana izany amin'ny namana na fianakaviana izahay. Eto ihany koa dia misy safidy telo handefasana azy amin'ny alàlan'ny mailaka, fampiharana fandefasan-kafatra na hizara izany amin'ny fampiharana hafa.
Aorian'ny rakikira voalohany dia mandeha mivantana amin'ny efijery lehibe misy ny tantara rehetra noforonina isika ary avy eo afaka manampy namana na mamorona toerana vaovao. Ireo habaka ireo dia ahafahantsika manana iray ho an'ireo rakikira manokana na iray izay tianay hizara amin'ny namantsika na olona ao amin'ny fianakaviana ary hahafahantsika mampita haingana ireo sary rehefa manampy ny fifandraisana aminy. Fomba iray tsara ahafahana mirindra ireo rakikira amin'ireo habaka ahafahantsika manamboatra amin'ny fomba irina.
Una fampiharana tsara izay avy amin'ny iOS ary izany dia misy ifandraisany amin'ny toetra sasany an'ny Google PhotosNy hany zavatra mitranga eto dia mifantoka amin'ny inona ny habaka sy rakikira, raha Google kosa manatanteraka asa lehibe hafa. Noho izany, raha mitady fampiharana fohy ianao hizarana sary amin'ny fomba manokana hahafahanao mizara sary sy rakikira amin'ny namanao na fianakavianao amin'ity Krismasy ity dia aza mangataka andro amin'ny fametrahana Storehouse.
Azonao atao ny miditra amin'ny fametrahana azy amin'ny alàlan'ny widget eto ambany fampiharana izay manantena ny hijinja ny fahombiazana tratra amin'ny iOS, na dia eto aza, miaraka amin'ny Google Photos dia ho sarotra kokoa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny storehouse dia mitaky fomba manokana manokana hizarana sary, ankehitriny amin'ny Android
7 herinandro dia fampiharana izay manampy anao hanana fahazarana vaovao na hametraka tanjona
Te hanana Nexus 5X mora vidy kokoa ve ianao? eto ianao manana fihenam-bidy 40 euro